Diso ve ny WWE sa tena misy? Fanontaniana iray tapitrisa dolara no voavaly - Wwe
Diso ve ny WWE sa tena misy? Fanontaniana iray tapitrisa dolara no voavaly
' Sandoka ve ny WWE? ' dia fanontaniana iray izay efa nifanontaniantsika rehetra sy ireo namantsika imbetsaka fony isika mbola tanora. Mety ho lohahevitra ady hevitra matetika io, saingy na eo aza izany rehetra izany, mbola hahita azy ihany ihany isika amin'ny farany. Fa mba hamaliana ny fanontaniana hoe 'tena WWE sa sandoka?' tsy valiny tsotra sy mahitsy araka ny antenainao.
WWE marika fa 'fialamboly ara-panatanjahantena' fa tsy tolona tolona. Ny anton'izany dia satria tamin'ny taona 1990, mba ahazoana haba bebe kokoa ary handoavana hetra vitsy kokoa, dia nanaiky tamin'ny fitsarana tampony i Vince McMahon fa ny WWE (antsoina hoe WWF) dia tsy fanatanjahantena tena izy, fa karazana fialamboly fotsiny. Ary ho azy sy ny orinasa dia niasa izy. Ny teny hoe 'fialamboly ara-panatanjahantena dia namaritra ny orinasa tamin'ny vanim-potoana sy am-polony maro, hatramin'ny vanim-potoana PG ankehitriny.
Tena misy ve i WWE? Ny zava-misy dia ny lalao fifaninanana sy ny ady eo amin'ny superstars dia tsy tena izy, satria ny lalao dia efa namaritra mialoha ny valiny. Na izany aza, tsy miala amin'ny zava-misy fa fialam-boly atletisma izany, ary ny mpilalao superstar rehetra dia mampiofana toy ny atleta.
WWE (sy ny tolona pro amin'ny ankapobeny) dia misy superstar mampiseho sary mihetsika fiction amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny fifandrafiana amin'ny script ary avy eo, lalao amin'ny script. Na izany aza, tsy nanakana ny WWE tsy hanaparitaka ny andalana misy eo amin'ny tantara foronina sy ny zava-misy izany.
Misy vitsy ny karazana fialamboly mivantana hafa izay nanapotika ny rindrina fahefatra ary nampifangaro ireo trangan-javatra tena izy ho lasa tantara. Raiso, ohatra, ny Pipebomb malaza an'i CM Punk, izay nanondroany sy nanehoany ny fahasosorany tamin'ny tena orinasa tamin'ny fahitalavitra mivantana. WWE dia nilaza tamin'i CM Punk mba hizaha ny zava-drehetra, saingy rehefa tsapan'izy ireo fa nalainy lavitra loatra izany, dia notapahin'izy ireo ny mic-ny, izay indrindra no nitranga.
Na izany aza, mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, ny fampidirana ireo lafin-javatra tena misy sy ambadiky ny sehatra dia tsy natomboka tamin'ny tolotra malaza nataon'i Punk. Zavatra nitranga indraindray hatramin'ny taona 1990. Na dia tamin'ny 2016 sy 2017 aza, ny Miz dia nandray anjara tamina fizarana maro antsoina hoe 'Promo Miasa Miasa'.
ny tifitra promo dia ny off-script tanteraka sy mifototra amin'ny zava-misy ny promo'ny mpiady. Ny «tifitra niasa» dia manjavozavo ny tsipika. Mampiasà singa tena izy hanampiana ny andalana ny tantara. Ny Miz dia tafiditra tao amin'ny promo 'shoot shoot' niaraka tamin'i Daniel Bryan tao amin'ny Talking Smack, niaraka tamin'i Enzo Amore ao amin'ny RAW, izay niresahany ny zava-misy fa voaroaka avy tao amin'ny bus bus eropeana WWE i Enzo tamin'ny tena fiainana.
Ireo kintana lehibe koa dia tsy ankanavaka amin'izany. Ny programa John Cena miaraka amin'ny Roman Reigns dia nahitana ampahany lehibe tamin'ny zava-misy nalaina ho tantara. Roman Reigns dia nanao toy izany koa tamin'i Brock Lesnar.
Ka hamaliana ilay fanontaniana hoe 'tena misy ve ny tolona?' , tsy izany. Fa na izany aza tsy azo isaina ho valiny mahitsy. Araka ny efa voalaza, efa voafaritra mialoha ny valin'ny lalao, asehon'ireo superstar ny tarehin-tsoratra toa ny ataon'izy ireo amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, saingy noho ny toetra ara-batana sy ara-panatanjahantena amin'ny tolona dia matetika no misy ny ratra ary ara-dalàna koa ny superstares mandeha amin'ny peratra, 98% ny ny fotoana.
Ny superstar WWE sy ny mpiady totohondry, amin'ny ankapobeny, dia mahazo flak betsaka amin'ny olona marobe amin'ny maha 'mpiady sandoka' na fandraisana anjara amin'ny 'fanatanjahantena sandoka', fa ny tsy takatry ny olona dia ny fametrahana ny vatany eo amin'ny laharana isaky ny alina ary atahorana haratra tsy tapaka. Manomboka amin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo be dia be ka hatramin'ny fampiofanana azy ireo ary ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo rehetra, dia tsy mendrika afa-tsy ny haja ambony indrindra izy ireo.
mijery don t miaina sarimihetsika feno
ny fomba hanakanana ny namana misy fifandraisana mahasoa